Dalxiiska Jean-Michel Cousteau, Fiji Hadda wuxuu soo dhaweynayaa martida soo noqnoqda, oo dib u furtay Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Fiji News Breaking » Dalxiiska Jean-Michel Cousteau, Fiji Hadda wuxuu soo dhaweynayaa martida soo noqnoqda, oo dib u furtay Adduunka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Fiji News Breaking • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji, oo ah meesha ugu sareysa ee loo dalxiis tago ee Koonfurta Baasifigga, ayaa diyaar u ah inay soo dhoweyso martidiisii ​​ugu horreysay kadib bilooyin loo xiray safrayaasha caalamiga ah, masiibada darteed. Waxay ku taallaa meel ku-meel-gaar ah, oo kulayl leh oo ku taal jasiiradda Vanua Levu oo iska indho-tiraysa biyaha xasilloon ee Savusavu Bay, Jean-Michel Cousteau Resort waa hal-u-baxsad u wanaagsan lamaanayaasha, qoysaska, iyo socdaalayaasha garashada leh ee raadinaya nasasho, tacabur, iyo dib -u -buuxin raaxo leh bilo ka dib markii aad gurigaaga u dhawaatay.
Fiji wuxuu rajaynayaa inuu dib ugu furo safrayaasha caalamiga ah (oo ay ku jiraan dadka safraya ee ka socda USA) laga bilaabo horraanta Noofembar.
Meesha loo dalxiis tago ee raaxada leh ee ku taal Jasiiradda Vanua Levu ee Koonfurta Baasifigga waxay bixisaa hibooyin iyo waayo-aragnimo hal-nooc ah.
Shaqaalaha dalxiiska ayaa si buuxda loo tallaaley, loo tababaray, waxaana ka go'an inay ka gudbaan heerka ugu sarreeya ee heerarka badbaadada iyo fayadhowrka COVID-19.
"Waan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno martideena iyo saaxiibadeena ku soo laaban doona Jean-Michel Cousteau Resort," ayuu yiri Bartholomew Simpson, Maareeyaha Guud ee Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji. “Ma sugi karno inaan aragno farxadda wejiyadooda oo aan maqli karno qosolka iyagoo mar kale booqanaya jasiiraddeenna si ay ugu raaxaystaan ​​oo ay u sahamiyaan yaababka dabiiciga ah ee cajiibka ah ee u socda Koonfurta Koonfurta Baasifigga. Intii lagu guda jiray waqtigan aan hore loo arag ee taariikhdeena, shaqaalaha dalxiisku waxay si hagar la’aan ah u shaqeeyeen si ay u ilaaliyaan quruxda guriga iyagoo ilaalinaya ballanqaadkayaga deegaanka. Waxaan diyaar u nahay inaan martideenna siinno fasax cajiib ah oo xusuus leh. ”
The Jean-Michel Cousteau Resort shaqaalaha si buuxda ayaa loo tallaaley, loo tababaray oo ay ka go'an tahay inay ka gudbaan heerka ugu sarreeya ee heerarka badbaadada iyo fayadhowrka COVID-19 iyagoo bixinaya adeeg macmiil oo soo dhaweyn leh. Shaqaaluhu waxay ku salaami doonaan martida wejiga dabool, iyo mararka qaarkood gacmo -gashiga, iyagoo hubinaya fogeynta bulshada iyo jirka. Intaa waxaa dheer, dhammaan meelaha taabashada sare leh waa la nadiifin doonaa oo la nadiifin doonaa marar badan.
Intaa waxaa sii dheer, Dalxiiska Fiji ayaa dhowaan abuuray “Ballan -qaadka Daryeelka Fiji, ”Barnaamij muujinaya nabadgelyada la xoojiyay, caafimaadka iyo hab-maamuuska nadaafadda ee dunidii ka dambaysay masiibada iyadoo waddanku isu diyaarinayo inuu dib u furo xuduudaha dadka socotada ah. Barnaamijka, oo loogu talagalay inuu gacan ka geysto yareynta faafitaanka COVID-19, ayaa waxaa soo dhoweeyay in ka badan 200 oo ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee jasiiradaha, hawl wadeennada dalxiiska, maqaayadaha, meelaha soo jiidashada leh iyo qaar kaloo badan.
Si aad u hesho boos celin iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Jean-Michel Cousteau Resort, fadlan booqo fijiresort.com.
Abaalmarinta abaalmarinta ee Jean-Michel Cousteau Resort waa mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee ugu caansan Koonfurta Baasifigga. Waxay ku yaalliin jasiiradda Vanua Levu waxayna ku dhisan tahay 17 hektar oo dhul ah, miciinka raaxada ayaa iska indhatira biyaha nabdoon ee Savusavu Bay wuxuuna siiyaa baxsad gaar ah lammaanaha, qoysaska, iyo socdaalayaasha garashada leh ee raadinaya safar khibrad leh oo ay weheliso raaxo dhab ah iyo dhaqanka maxalliga ah. Jean-Michel Cousteau Resort waxay bixisaa khibrad fasax oo lama ilaawaan ah oo laga soo qaatay quruxda dabiiciga ah ee jasiiradda, fiiro gaar ahaaneed, iyo diirimaadka shaqaalaha. Dalxiiska deegaanka iyo bulshada mas'uul ka ah wuxuu siiyaa martida adeegyo kala duwan oo aad u kala duwan, oo ay ku jiraan qolof saqafka saqafka ah oo si gaar ah loo qaabeeyey, cunno heer caalami ah, saf aad u fiican oo ka mid ah nashaadyada madadaalada, waaya-aragnimada deegaanka oo aan la jaanqaadi karin, iyo noocyo badan oo daaweyn isboorti ah oo Fijian dhiirrigelisay. fijiresort.com
Ku saabsan Canyon Equity LLC
Kooxda Canyon Group ee Shirkadaha, oo leh goobta loo dalxiis tago, oo xarunteedu tahay Larkspur, California, waxaa la aasaasay bishii Maajo 2005. Mantradeeda ayaa ah in la helo oo la horumariyo goobo-dalxiisyo summadaysan oo aad u raaxo leh meelo gaar ah oo leh qaybo deggenaansho oo yaryar oo abuuraya dareen aad u sarreeya bulshada meel kasta. Tan iyo markii la aasaasay 2005 Canyon waxay abuurtay faylal dalxiis oo cajiib ah, meelaha laga bilaabo biyaha turquoise ee Fiji, ilaa meelaha ugu sarreeya ee Yellowstone, ilaa deegaannada farshaxanka ee Santa Fe, iyo Canyons ee koonfurta Utah.
Qoraalka Canyon Group wuxuu ka kooban yahay astaamo sumcad leh sida Amangiri (Utah), Amangani (Jackson, Wyoming), Four Seasons Resort Rancho Encantado (Santa Fe, New Mexico), Jean-Michel Cousteau Resort (Fiji), iyo Dunton Hot Springs, (Dunton , Colorado). Qaar ka mid ah horumarada cusub ee la yaabka leh ayaa sidoo kale ka socda meelaha sida Jasiiradda Papagayo, Costa Rica, iyo Hacienda oo 400 sano jir ah oo ku nool Mexico, dhammaantoodna waxaa loo qoondeeyay inay hadallo waaweyn ka sheegaan suuqa ugu wanaagsan ee safarka caalamiga ah ee aadka u raaxada leh sida mid walba loo bilaabay . canyonequity.com